कुन देशका नागरिक बढी बाँच्छन् ? यस्तो छ दीर्घजीवनको रहस्य | Rajmarga
सताब्दियौदेखि अमरताको बुटीको खोजी जारी छ । त्यो नभए पनि लामो उमेरको बरदान सबै चाहन्छन् । तर, यहाँ पाँच यस्ता देशको गरिँदैछ, जहाँका निवासीको औषत आयाु संसारको औषत आयु ७१ वर्षभन्दा बढी छ । तपाईलाई थाहा छ उनीहरुको दीघायुको रहस्य ?
सन् २०१७ को विश्व प्रसन्नता रिपोर्टका अनुसार सबैभन्दा लामो उमेर बाँचने केही देशबासीसँग हामीले कुरा ग¥यौ । हामीले उनीहरुको लामो उमेरको बारेमा जान चाह्यौ कि उनीहरुको दीर्घायुको रहस्य के हो ?
जापानी नागरिकको औषत आयु हो ८३ वर्ष । जापानको दक्षिणी टापु समूह ओकिनावा वर्षौदेखि दीर्घजीवनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको विश्वस्तरीय केन्द्र बनेको छ। अमर देश कहलाउने यो द्वीप समूहमा ४ सयभन्दा बढी नागरिक एक सय वर्ष पार गरेकाहरु छन् । अझ १ सय वर्षभन्दा पनि बढी उमेरका छन् ।यसको श्रेय जाने गरेको छ, त्यहाँका स्थानीयको खानपान अर्थात धेरै तोफु, संकरखण्ड र थोरै समुद्री माछा । वृद्ध जापानिजहरुको सक्रिय सामाजिक संगठन र सुदृढ सामुदायिक भावना पनि तनाव कमस्तरमा राख्न सहयोगी छ।
तर, तपाई यहाँका बासीको सोचिरहनु भएको छ भने जापानी भाषा अवश्य सिक्नुस् । लामो समयदेखि जापानमा रहेकी भेलभेट मिडियाकी सिईओ डेनियल गैटी भन्छिन्–जापानको जीवनशैली अद्भुत छ । तर यहाँका नागरिकलाई बुझ्न र स्थानीय समाजसँग तालमेल मिलाउनका लागि जापानी भाषा सिक्नु जरुरी छ।
अब कुरा गरौं स्पेनको । मुटुका लागि उत्तम ओलिभ तेल, सागपात र वाइनले भरपुर हुन्छ, यो भूमध्यसागरीय देशको भोजन । स्पेनबासीहरुको लामो उमेरको (औषत आयु ८२.८ वर्ष) मा उनीहरुको यही खानपानको विशेष योगदान छ। साथै अर्को एउटा पनि रहस्य छ, त्यो हो सिएस्ता अर्थात दिउँसो आराम र मिठो निद्रा ।
स्पेनमा पसलहरु दिउँसो दुई बजेदेखि पाँच बजेसम्म बन्द रहन्छ । यहाँ कामको तालिका यसरी निर्धारित छ कि सबैले दिउँसो आराम गर्ने अवसर पाउँछन् ।बार्सिलोनाको ग्रे लाइन टुर गाइड माइकल एंजेल डियाज बेसोरा भन्छन्–यदि तपाईको लगातार शिफ्ट छ र बिचमा मात्र आधा घण्टाको समय लञ्चका लागि पाउनुभयो भने तपाई छिटछिटो केही खानुहुनेछ र फेरि काममा जुट्नु हुनेछ । तर, कामको अवस्था दुई तीन घण्टा बन्द गर्ने अवस्था छ भने तपाई आफ्नो घर वा रेष्टुरेन्टमा आराम गरेर खाना खानु हुनेछ र त्यो राम्रोसँग पच्ने पनि छ। वास्तवमै यो तरिका झटपट खानुभन्दा बढी स्वास्थ्यकर छ ।
यसका साथै स्पेनबासी पैदल हिड्न वा साइकलबाट आउन जान मन पराउँछन् । किनभने यहाँ पसल र रेष्टुरेन्टहरु सबैकुरा स्थानीयको घर नजिकै छ ।बार्सिलोना इट लोकल फूड टुअर्सका सहसंस्थापक मारिना भन्छिन्–पैदल हिड्ने र साइकल चालनउे बानीले स्पेनबासीलाई सधै चुस्ततन्दुरुस्त र ऊर्जाले भरिपूर्ण राख्ने गर्दछ ।
विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा र त्यसको सर्वसुलभताका कारण अहिले सिंगापुरबासीको औषत आयु ८३.१ वर्ष भएको छ । यो देशमा मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर निकै कम छ । र, रोग रोकथापका लागि चिकित्सा सञ्जालको मुख्य फोकस छ ।
सिंगापुरको संस्कृति र शहरी सुविधाहरुसम्म नागरिकको सहज पहुँच पनि यहाँका नागरिकको दीर्घ जीवनको महत्वपूर्ण कारण हो । यात्रा ब्लर आई वान्डरका ब्लगर बीनो चुओ भन्छन्–यहाँ तपाईले धेरैलाई जिम जाँदै गरेको देख्नु हुनेछ । यहाँ सार्वजनिक पार्कहरु प्रसस्त छन्, जहाँ कसरत गरिरहेका नागरिक देख्न सक्नुहुनेछ ।हालै सिंगापुरमा पहिलो थेरापी पार्क खोलिएको छ। यसलाई तनाव क मगर्ने र वृद्धवृद्धाको मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारमा ध्यान दिने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको छ।र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यहाँ खराब बानी पालना गर्नु निकै महंगो छ । चुरोट र मदिरामाथि भारी कर लगाइएको छ, अन्य देशको तुलनामा यसको मूल्य निकै महंगो छ।
युरोपको सर्वाधिक धनी देशका रुपमा चर्चित स्वीटजरल्याण्डका पुरुष संसारमा सबैभन्दा लामो उमेर बाँच्छन् । उनीहरुको औषत आयु ८१ वर्ष छ । उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था यहाँको लामो उमेरको रहस्य हो ।त्यसो त अध्ययनहरुमा स्वीस भोजनमा चिज र दुग्धजन्य उत्पादनको प्रयोगलाई दीर्घ जीवनको सबैभन्दा ठुलो कारक मानिएको छ।
स्वीटजरल्याण्डमा कयै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुका मुख्यालय छन्, जहाँ तमाम देशका नागरिक काम गर्दछन् । उनीहरुको मुख्य फोकस आफ्नो करिअरमा रहनु हो । यस्तोमा युरोपको मध्यतिर रहेको स्वीटजरल्याण्डको सप्ताहन्तमा युरोपको निकै सुन्दर स्थलहरु र आल्प्सको सुन्दर पहाडहरुका कामको तनाव भगाउने आदर्श स्थान मानिएको छ।
स्वीटजरल्याण्डमा बसिसकेकी गैटीले भनिन्–स्वीटजरल्याण्डमा संसारका सबैभन्दा उत्तम निजी विद्यालय पनि छ । त्यसैले यो युवा दम्पत्तिहरुको मनपर्ने स्थान हो ।
हालै गरिएको एउटा अनुसन्धानका अनुसार दक्षिण कोरिया ९० वर्ष औषत आयु प्राप्त गर्ने संसारको पहिलो देश बन्दैछ । बलियो र प्रगतिशील अर्थव्यवस्था भएको उत्तर कोरियामा सबैलाई स्वास्थ्य सुविधा सुलभ छ । अर्को विशेष कुरा पश्चिमी देशहरुको तुलनामा यहाँ मानिसको रक्तचाप कम रहने गर्दछ ।
यहाँको दीर्घजीवनमा भोजन पनि मुख्य मानिन्छ । यहाँको खानामा खमीर अर्थात जौंको प्रधानता रहने गर्दछ । यसको सेवनबाट कोलेस्ट्रोल कम रहन्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ र क्यान्सरबाट पनि बचाउँछ ।
सामुदायिक संस्कृतिको बल र परम्पराहरुको निर्वाह पनि कोरियाली नागरिकको दिनचर्याले जीवनको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरेको छ। यो सबैका साथै यहाँ बौद्ध दर्शनबाट प्रभावित जीवनशैलीमा शान्ति र सन्तोष विशेष महत्वको छ । व्यक्तिवादिताको तुलनामा सहयोगको भावनामा जोड दिइन्छ ।
आशा गरौ कि संसारका बाँकी देश र देशबासी पनि दीर्घ जीवन भएका यी मुलुकबाट केही सवक सिक्नेछन् । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: मोटोपनले यसरी किड्नीको क्यान्सर निम्ताउँछ, यस्तो हुन्छ लक्षण
Next post: तपाईलाई थाहा छ, यौनसम्बन्धी विचित्रका यी अध्ययनहरुको नतिजा ?